रोजगार | आर्थिक सन्देश रोजगार | आर्थिक सन्देश
एमसीसीमा जागिर गर्ने हैन ? परियोजनाले माग्यो कर्मचारी
काठमाण्डौ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए–नेपालले जनशक्ति नियुक्तिका लागि आवेदन खुला गरेको छ । एमसीए–नेपालले विभिन्न १० पदको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो । इच्छुक उम्मेदवारले १५ मार्च २०२२ अर्थात चैत...}
कोरिया जाने प्रतिक्षा रहेका नेपालीहरुको लागि आयो यस्तो खवर
काठमाण्डौ। लामो समय देखि कोरिया जाने तयारीमा जाने तयारीमा रहेका नेपालीहरु अब भने जान पाउने भएका छन । कोरियाको मानव संसाधन विकास बोर्ड तोकेको मापदण्डअनुसार कोरोना बीमा र सीधा उडानको सम्झौतापछि नेपाली कामदार कोरिया पठाइने वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस शाखाले जनाएको छ। कोरियाका लागि सीध...}
बढ्यो श्रमिकको तलब,यो महिना देखि कति पाउँछन् ?
काठमाडौं : महंगीले आकाश छोएको बेला सरकारले थोरै भए पनि राहात दिएको छ । सरकारले वृद्धि गरेको निजी क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी मासिक रु १५ हजार पुर्&zw...}
काठमाण्डौ । सार्वजनिक संस्थान अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रत्यक्ष रूपमा २८ हजार ३६४ जना रोजगारीमा आबद्ध छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा १३ हजार ४०४ र सबैभन्दा कम व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानमा एक हजार २७९ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा कर्मचारी...}
काठमाडौं । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेर मासिक रु १५ हजार पुर्याइने घोषणा...}